အဘယ်အရာကို ED မူးယစ်ဆေးဝါးများ (Viagra, Cialis) နှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED ကော?
Viagra နှင့် Cialis ကဲ့သို့သောဆေးများ၏သက်ရောက်မှုများသည်သင်၏အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ အကယ်၍ သင်သည် PIED ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲ (နှင့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုနေဆဲ) ဖြစ်ပါကသင်၏အားနည်းခြင်းပြproblemနာကိုခေတ္တဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာမှမကုသနိုင်ကြဘူး။ သင်၏ ဦး နှောက်အတွင်းရှိပလတ်စတစ်အပြောင်းအလဲများကိုသင်၏အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုကြိုးပမ်းစေသောရောဂါများကိုကုသရန်သူတို့အလုပ်မလုပ်ပါ။
Erectile ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်လိင်ဆိုင်ရာတိုးမြှင့်ဆေးများကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက Gary ကိုကြည့်ပါ Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့် Porn ဆလိုက်ရှိုး
ED meds အစား dopamine agonists သည် YBR တွင်ချည်မျှင်ဖြစ်သည်
ပြနာကမင်းရဲ့လိင်အင်္ဂါထဲမှာမပါဘူး -Norman Doidge, MD ကရှင်းပြသည်။ သင့်ဦးနှောက်အချိန်နှင့်တစ်ဦးမရှိခြင်းလိုအပ်ပါတယ် ပကတိမဟုတ်လူလုပ်သော လိင်ဆွ။ ၎င်းသည်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုပုံမှန်အထိခိုက်မခံခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုမြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်ပြန်သွားနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးလိမ့်မည်။ သင်လည်းလိုအပ်နိုင်ပါသည် သင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု rewire တကယ့်ဖက်ရန်။
အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးများ အကယ်. do သင်ဘို့စိုက်ထူနေဆဲ, သင်သတိမပြုမိသတိပြုမိလိမ့်မည် ခံစား arousal များ၏ပြင်းထန်မှု။ arousal သင့်ဦးနှောက်၏အကျိုးကို system ကိုအပေါ်သို့မှီခိုဖြစ်ပြီးဒီဆေးတွေလိင်တံမဟုတ်ဘဲလိင်တံပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ တဦးတည်းကောင်လေးကလည်း,
ဤတွင် Cialis မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံအကျဉ်းချုပ်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏နားလည်မှုကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။ သင်၏လိင်တံကိုနှိုးသောအခါသွေးနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ပြီးတော့ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဓာတ်ပြုမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်မနိုးထသောအခါသင်၏လိင်တံမှသွေးကိုထုတ်ပစ်သည်။ Cialis သည်သွေးကိုလိင်တံထဲသို့မသွင်းပါ။ အဲဒီလိုလုပ်တာကသွေးထဲကိုရောက်တာနဲ့သွေးသွန်တာကိုတားဆီးပေးတယ်။
PMO စွဲသူများအတွက်ဤပြwithနာမှာကျွန်ုပ်တို့၏သွေးကြောထဲသို့ပို့လွှတ်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ neurochemical system သည်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် Cialis သည်သွေးဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ရန်၎င်း၏လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်သွေးစတင်ရန်လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ငါအရင်က Cialis ကိုသုံးတယ် သင်ကိုယ်တိုင်နှိုးဆွနိုင်လျှင်၎င်းသည်“ အလုပ်လုပ်သည်။ ” ငါ၏အနှိုးဆော်သံသံသရာလုံးဝ desensitized သောအခါ, ငါ့အဘို့အများကြီးမလုပ်ခဲ့ဘူး
ထို့အပြင်၎င်းတို့အပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ လေ့လာမှုကိုကြည့်ပါ။ ယင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအသုံးပြုသူများသည် recreationally မိမိတို့၏အရည်အချင်းများနှင့် ပတ်သက်. ယုံကြည်မှုနည်းခဲ့ကြ.
ငါ Levitra များအတွက်သည်းခံစိတ်တီထွင်ခဲ့ကြပုံရသည်။ Viagra နဲ့ပတ်သက်တဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးပြီး ၂ နှစ် ၃ နှစ်အကြာမှာငါကလူအများစုကဒီအနေအထားကိုရောက်နေပြီ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါရူးနေတယ်။ ပြန်လည်ကျင့်သုံးပြီးနောက် ၁၀ မိနစ်စံညွှန်းကိုသုံးစဉ် gf ကို ၃ ကြိမ်ကျရှုံးခဲ့သည်။ levitra ကိုအသုံးပြုနေစဉ်ပထမ ၂ ကြိမ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ခါမျှမကြားခဲ့ရသောစိုက်ထူမှုကိုရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ထလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်အမြဲတမ်း ၅ မိနစ်မှ ၁၀ မိနစ်အထိလျော့နည်းသည်။
တတိယအကြိမ်၊ မနေ့ကငါ ၁၄ မီလီဂရမ်လိုသောက်ခဲ့တယ်။ (၂၀-၂၀ မီလီဂရမ်ဆေးပြားတစ်ဝက်လောက်ခွဲလိုက်တယ်။ ) ငါမူးဝြေဖိုးသွားပြီးသွေးဖြူဖြစ်လာတယ်။ အားလုံးပင် .. မှာအားလုံးမရွှေ့ခဲ့ပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်အရမ်းစိုးရိမ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တုန်းကငါဟာမရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားခဲ့တဲ့အချိန်တွေဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်။
Cialis နှင့် Viagra (PDE5 inhibitorsသင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏သွေးကြောဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုယာယီပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်ပါ အန္တရာယ်များဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိအဖြစ်နှောင့်အယှက်သူတွေကို။ အဖြစ်များသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာဖလပ်စ်၊ စိတ်ဆိုးခြင်းနှင့်အစာအိမ်နာခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ နှာခေါင်းပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံ:
ငါနှစ်ပေါင်းများစွာမိန်းကလေးအတော်များများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပေမယ့် PIV အကြိမ်အနည်းငယ်သာဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့သည် လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှတစ်ဆင့်စကားမပြောနိုင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်အားအသုံးမကျ၊ ငါ့မှာရည်းစားရှိတာ ၃ နှစ်ရှိပြီ။ တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး။ သူမကကျွန်မကိုအရမ်းချစ်တယ်၊ ငါတို့အဲဒါကိုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လိင်ကိစ္စဟာအရင်ကလိုမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ Viagra မှမည်သည့်အကူအညီမှမပါဘဲ၎င်းကို (သို့မဟုတ်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်း) မရှိသလောက်ပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စျေးကြီးပြီးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ (ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ - ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မျက်နှာရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုမီ / အပြီး / အပြီး / စ၍ နို့စို့ခြင်း) !! ) ။
တစ်ဦး reboot ကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးအသုံးပြုခြင်း
reboot လုပ်နေစဉ်အတွင်းလိင်မှုကိစ္စတိုးမြှင့်ဆေးများကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါဟာသင်ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်၌သင်တို့ရှိရာပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သူတို့သည်အလုပ်မလုပ်ပါကသင်၏လိင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းသည်စောလွန်းပါလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးတော့သော်လည်း, သူတို့သည်တစ်ခါတစ်ရံယောက်ျားတွေကို restart တဲ့ကာလပြီးနောက်လိင်သို့ပြောင်းလဲကူညီနိုင်သည်
2 လကြာမျှမ PMO ပန်းတိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းကျွန်မ ED စစ်ဆေးသည်မှဆရာဝန်တစ်ဦးထံသို့သွားလေ၏။ အဆိုပါဆရာဝန်အရာအားလုံးဇီဝကမ္မငါနှင့်အတူအ functional ဖြစ်စေခဲ့ဟုဆိုသည်။ အဘယ်သူမျှမ PMO ၏2လအကြာ, ငါ gf နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါစိတ်ပျက်ခဲ့ "။ သူကဖွင့်မရ" ကိုမတတျနိုငျ, ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုပြန်ဆယ်တင် reboot လုပ်ပါမပါကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူတစ်ယောက်ယောက်ကိုအဘို့ယူအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအကြောင်းကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်, ငါသိသင့်တယ်။ ဒါဟာငါနေဆဲဆက်ဆံရေး (ငါသည်ဤပျက်ကွက်ပြီးနောက်ဧကန်အမှန်ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တော့ကြာရှည်မဟုတ်ကြောင်းစိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်) ကယ်တင်ဖို့ဖို့တစ်ခုခုရှာဖွေနေခဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာလည်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါဆရာဝန်တစ်ယောက်ဆီသွားပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြexplainedနာကိုရှင်းပြခဲ့တယ်။ ထိုအခါငါ Viagra တူသောမူးယစ်ဆေးဝါးများဒီဖြေရှင်းရန်တောင်းပန်ခဲ့သည်။ ဤဆရာဝန်သည်ဆေးညွှန်းကိုငြင်းဆိုပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်ဘာမျှမမျှော်လင့်ပါ၊ သို့သော်သူအားအရာအားလုံးကိုရှင်းပြပြီးသောအခါ Viagra သည်ကျွန်ုပ်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်ကြောင်းသဘောတူခဲ့သည်။ နှစ်ပတ်အကြာသူမနှင့်အတူမင်္ဂလာဆောင်သွားပြီးနောက်, ငါတို့နှစ်ကြိမ်, လိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့ကြတယ်! ဒါက ၁၀ ပတ်ကျော်အတွင်းကျွန်မရဲ့ပထမဆုံး "အို" ပဲ။
Viagra ကိုသုံးခြင်း၏ဆိုးကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ အဲဒါကကျွန်မကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုပေမယ့်မှီခိုမှုကိုလည်းဖြစ်စေတယ်။ ငါကယူတဲ့အခါငါဖျော်ဖြေနိုင်ဘူး။ ငါမလုပ်တော့သည့်အချိန်အများစုသည်ငါမထနိုင်ခဲ့ပါ။ ငါဆေးတစ်ဝက်အထိကိုယ့်ကိုယ်ကိုနို့စို့စပြုလာသည်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါပိုပြီးယုံကြည်မှုရနိုင်ခဲ့သည်။ ဒါကဇူလိုင်လအစောပိုင်းကစပြီးညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကိုကျွန်တော်မကြည့်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အချက်နဲ့အတူဆက်ပြီးကူညီခဲ့တယ်။ (ငါတစ်ခါတလေတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးလုပ်နေဆဲ) ပဲ။ ကျနော့်ရဲ့နောက်ဆုံးပြသနာက ၂၀၁၃ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဖြစ်မယ်။
အဲဒီအချိန်အတောအတွင်းငါစိုက်ထူရမယ့်အချိန်အားလုံးနီးပါးကိုပြောလိမ့်မယ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးကျွန်တော်မတက်နိုင်တဲ့တစ်ကြိမ်တော့မရှိခဲ့ဘူး။ အသက် ၂၄ - ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်၊ ၅ Viagras သည်အသွင်ပြောင်းရာတွင်ကူညီခဲ့သည်
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀% cialis ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုတည်ဆောက်ရန်အကြံပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ဆေးပြား ၃၀ ရှိပြီး ၂၀ ကျော်ကျော်ကျန်ရှိနေသေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုသုံးစွဲမည်ကိုသံသယရှိသည်။
ယောက်ျားတွေထို့နောက် cialis အသုံးပြုသောရှိရာနှစ်ဦးကိုအပြည့်အဝပြန်လည်စတင်ဆေးထိုး tapered:
အသက် ၂၆ နှစ် - အိမ်တွင်တစ်ယောက်တည်းထိုင်ပြီးမှရည်းစား (ED) နှင့်လိင်ဘဝကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေသည့်အထိ
အမှန်ကတော့ကိုကုစား !!! အကြှနျုပျ၏နည်းလမ်းများ, ရလဒ်များနှင့်နိဂုံး
သငျသညျ rebooting နေစဉ်, Viagra နှင့် Cialis သင်တို့အဘို့အများကြီးမလုပ်လျှင်, စိတ်မပူပါနဲ့။ သင်၏ ဦး နှောက်၏အစိတ်အပိုင်းများသည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုကိုထိန်းချုပ်သော…ကုသရန်အချိန်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤအတွေ့အကြုံရှိသည့် porn-related erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြင်းထန်သောရောဂါများရှိသူအချို့၏မှတ်ချက်များဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်ကမှငါ့ကိုမြင်းပေါ်ပြန်လာစေဖို့ y. man..doctor က cialis ကိုပေးခဲ့တယ်။ တိုတိုပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာအဲဒါကိုမှီခိုလာတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်ကသူ့ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ၊ ဒါကြောင့်ငါလည်းဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်တယ်၊ ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်စရာကောင်းတယ်။ EDO နဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုပါ PMO ကိုကျိန်ဆဲတာကအကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အချိန်ယူရ ဦး မယ်။
ED မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသုံးစဉ်ကဤအရာသည်ဘယ်သောအခါမျှစကားပြောခြင်းကိုဘယ်တော့မှမမြင်ပါ။ ဟုတ်တယ်၊ မင်းကမင်းကိုမင်းကိုမုန်းတီးအောင်ကူညီပေးတယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့သင့်ရဲ့အော်ဂဇင်ဟာနည်းနည်းလေးမှောင်မည်းလာသည်။ သို့သော်သင်သည်ထိုအရာများ၌ကြာရှည်စွာနေပါက (သင်သူတို့ကိုအသုံးမပြုခြင်းအပေါ်စိုးရိမ်သောကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းနေပါက) ၎င်းသည်ယခင်ကမည်မျှကောင်းမွန်သည်ကိုသင်လုံးဝမေ့သွားသည်။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုအိပ်မပျော်တာကိုအချိန်တိုင်းနီးပါးပေးတယ်။
newsဝံဂေလိတရားသည်ငါတို့၌ယခုတည်လျက်ရှိ၏။ အိုဘုရားသခင်၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်စိတ်မည်မျှစိတ် ၀ င်စားသည်ကိုမေ့ခဲ့သည်။ PMO ကိုရပ်တန့်ရန်မှာအချက်တစ်ချက်လည်းသေချာသည်။ သို့သော်၎င်းသည် ED ဆေးဝါးများမလိုအပ်သည့်၊ အံ့သြဖွယ်ရာ trifecta ကိုကျွန်ုပ်ဖန်တီးလိုက်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်ဤကမ္ဘာလိင်မှထွက်ပေါ်လာသောစိတ်နှင့်ရင်းနှီးမှုရှိလိုသောဆန္ဒဖြစ်သည်။ အသက်ကျန်းမာအလယ်တန်း (3) မှ 48 လအစီရင်ခံစာနှစ်ကြိမ်လက်ထပ်ကောင်လေး
ငါရှိသောကြောင့်ငါ၏အညစ်ညမ်းသွေးဆောင် ED ၏နှစ်ပေါင်း Viagra နှင့် Cialis ကိုယူ။ ခဏတစ်ပြီးနောက်, သူတို့အမှုအရာအများကြီးပိုဆိုးဖန်ဆင်းသည်ဟုဆိုရန်လြော့ပေါ့ခနျမှနျးခကျြပါပဲ။ သငျသညျစစ်မှန်တဲ့သည်အနာပျောက်စေသောချင်လျှင်ဆေးပြားကနေဝေးနေပါ။
နေ့ 45, ငါသည်ဤပြောနိုင် - ငါသည်ငါ့တိုးတက်မှုနှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ ငါ၏အဇာတ်လမ်းအပေါ်တချို့ကနောက်ခံ:5နှစ်ပေါင်းလက်ထပ်ခဲ့ဖူး - 3.5 နှစ်ပေါင်း ED နဲ့စပ်လျဉ်းဟုတ်သည်, ငါသည် 3.5 နှစ်ပေါင်း ED ကိစ္စများရှိခဲ့ပါပြီငါ့ကိုခိုလှုံပါ၏။ ကျနော်တို့အစဉ်အဆက်ကဤ 3.5 နှစ်များတွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖန်ဆင်းထင်ကြပါဘူး။ သစ်တစ်ခုနိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ငါ့မိသားစု doc Viagara နဲ့ကျွန်မတောင်မှဒီအလုပ်မလုပ်ဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတူဒါစိတ်ပျက်ခဲ့အကြံပြုသည်။ မေတ္တာအောင်ရောက်လာသောအခါငါလက်မ porn ကြည့်နေစဉ်တစ်စိုက်ထူရဖို့ဆက်လက်ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုခက်ခဲငါ့မိတ်ဖက်များအတွက်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူမဟာစူပါနားလည်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။
ပစ္စည်းပစ္စယ browsing နေချိန်မှာငါ nofap နှင့်၎င်း၏အကျိုးခံစားခွင့်အကြောင်းအများကြီးဖတ်နေစတင်ခဲ့ပြီးကြောင့်တစ်ဦးကိုပစ်ခတ်ပေးချင်တယ်။ ဇွန်လ 30, အံ့သြဖွယ်ခံစားအတွက် 2017 ရက်ကြာ Streak ခဲ့ပေမယ့်နောက်ကျောအတူတူသံသရာသို့ရတယ်။ ဤသည် 1st ဒီဇင်ဘာလအပေါ်စတင်သောငါ၏ဒုတိယ Streak ဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်များအံ့သြဖွယ်နေသောခေါင်းစဉ်:
- ခိုင်ခံ့သောစိုက်ထူခြင်း, သူတို့ကိုတိတ်ဆိတ်စွာကြာရှည်စွာခံနိုင် အသက် ၃၀ - အိမ်ထောင်သည် ၅ နှစ် - ED ၃.၅ နှစ် (Viagra ကိုတောင်မှချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိ) PIED သည်ယခုအခါပျောက်ကင်းသွားပြီ။
ငါနofapကိုစတင်ခဲ့တာကငါ့ကောင်မလေးနဲ့ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ၊ ငါ့လိင်တံမထမြောက်နိုင်လို့ပါ။ ငါထင်တာကစွမ်းဆောင်ရည်ကစိုးရိမ်တာပဲလို့ထင်ပေမယ့် ... ဒါဆိုလိင်မှုကိစ္စကို ၃ ကြိမ်ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ဖို့မေ့ခဲ့ဖူးတယ်။ တတိယအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံစဉ် ၅၀ မီလီဂရမ်ဆေးပြားပြင်းထန်စွာစိုက်ထုတ်ခြင်းဖြင့်မထိုးဖောက်နိုင်ပါ။
သနားစရာ, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်စဉ်းစားမိတယ်။ ငါလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်မစဉ်းစားခဲ့ဖူးသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်စဉ်းစားလိုက်သောအခါညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်နေစဉ်ငါ့စိုက်ထူမှုများသည် ပို၍ နူးညံ့သိမ်မွေ့သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်အခက်အခဲမခံသောစိုက်ထူခြင်းနှင့်ပင်သန္ဓေတည်ခြင်းပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ နှင့်သော SEMI ကို Hard State နေစဉ်တစ် ဦး Fucking သွားမယ့် !!!!
nofap ကိုရှာရန်အနည်းငယ် googled, အဘယ်ကြောင့်မဟုပြောသည်။ ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးအကြိမ်သည် ၁၇ ရက်ပတ်လုံး PIED (Porn Induced Erectile Dysfunction) ကိုဆိုလိုသည်။ ပြproblemsနာတွေရှိနေဆဲ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေပျောက်နေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်ဆက်ကြိုးစားဖို့အလုံအလောက်မရှိသေးဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်ဒုတိယအကြိမ်ပြေးလမ်းပေါ်၌ရလဒ်များမှာ -
နံနက်သစ်သား: Rock ရှိဖို့ကွိုးစားစိုက်ထူဆုံးနံနက်
ကျပန်းအများပြည်သူစိုက်ထူ: Rock ခဲလှ၏
gf နှင့်အတူ Cuddling: Rock ရှိဖို့ကွိုးစားစိုက်ထူ
gf နှင့်လိင်ဆက်ဆံပါ။ ROCK ROCK ROCK ROCK THE VIAGRA မပါ ၀ င်ပါ။ ငါအရမ်းပျော်ရွှင်မိပါတယ်!
ယောက်ျားတွေ၊ အဲဒါငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ငါအသက် ၂၂ နှစ်ပဲရှိသေးတယ် အသက် ၂၂ - Viagra တောင်မှအလုပ်မလုပ်သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင် PIED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်
သိပ်မကြာခင်မှာကျွန်မမှာပြproblemနာတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်၊ ပြီးတော့ဒီဖြေရှင်းချက်ဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ထင်ရှားတယ်။ ငါစိုက်ထူဆေးတွေယူခဲ့ရတယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်သူတို့ဟာတကယ့်ကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုလိုအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ခင်ဗျားမြင်တာကသူတို့ကစိုက်ထူမှုမဖြစ်စေဘူး၊ ကူညီပါ သငျသညျတစျခုရရှိအတွက်။ အဲဒီမှာပြီးတာနဲ့သင်အရင်ကထက်ပိုခက်ပါလိမ့်မယ်၊ သင်လိုချင်သလောက်ကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။ အံ့သြစရာ ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်ရဲ့စျေးကြီးတဲ့ခရီးဟာဆေးပေါင်ဆေးပြားကိုမှီခိုခဲ့တယ်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့ငါမဟုတ်ဘူး ထို မကောင်းဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါမျိုလိုက်တိုင်းငါမာနကိုနည်းနည်းမျိုချမိတယ်။ ကျွန်တော်လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားသည်ဘယ်သောအခါမျှအမှန်တကယ်တည်ရှိသည်မဟုတ်ဟူသောအချက်ကိုမဖော်ပြပါ။ ငါဟာခက်ခဲပေမဲ့အရမ်းနှိုးဆွမှုမရှိခဲ့ဘူး။ ငါမတည်ရှိနိုင်ဖို့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမစဉ်းစားတော့တဲ့အခါငါဘာမှမစဉ်းစားတော့ဘူး။ လိင်ကပျော်စရာမကောင်းဘူး၊ တစ်ဦးကလွန်ခဲ့သောတစ်လငါလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်စိုက်ထူဆေးပြားများနှင့်ညစ်ညမ်းအပေါ်မှီခို။ ယခုငါကိုလညျးမတားဆီးခံစားရတယ်အလုပ်နှင့်ကိုယ်ကမကြိုက်ပါမှစတင်ခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်မနေ့ညကကလပ်ကိုကျွန်တော်သွားပြီး၊ ငါနေတဲ့နေရာမှာပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အဆုံးသတ်လိုက်တယ်။ ငါဘယ်သူ့ကိုမှအိမ်ပြန်မသွားချင်ပေမယ့်ငါမူးနေတယ်။ အဲဒီနောက်မှာငါနဲ့အတူ Viagra ရှိခဲ့ရင်ဒါကဘာအဆိုးဆုံးဖြစ်နိုင်တာလဲ။ ဒါနဲ့ငါထင်ခဲ့တယ် ငါတကယ်ပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူအိပ်ရာ၌ထအဆုံးသတ် AND ငါ (ကလပ်ထဲမှာနေဆဲ) အကြောင်းကိုတစ်နာရီမတိုင်မီ Viagra ၏တ ဦး တည်းဆေးလုံးကိုယူခဲ့သည်။
အဲဒါကိုရဖို့ခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမယ့်ငါကနောက်ဆုံးမှာ Semi- စိုက်ထူတယ်။ ဒါဟာချက်ချင်းနောက်မှနောက်ကျောမ - စိုက်ထူပြည်နယ်သို့သွားကြ၏။ ငါအရမ်းစိတ်ဆိုးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါနောက်ထပ်2Viagra ဆေးပြားကိုယူ။ နောက်တစ်နာရီအကြာတွင် Semi-Erection နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံရနိုင်သော်လည်းမကြာမီတွင်သူသည်မရပ်တည်နိုင်သည့်အခြေအနေသို့ရောက်သွားပြန်သည်။ OMG ကရှက်ဖို့ကောင်းတယ်။ ငါမူးနေတော့အသေးစိတ်ကိုမှတ်မိဖို့ခက်တယ်။ ဒါပေမယ့်သေချာပေါက်ဆေးလုံးကအလုပ်မလုပ်ဘူး
Viagra ဟာတကယ်အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်လည်းတွေ့ခဲ့တယ် ၎င်းသည်အနည်းငယ်ကူညီပေးခဲ့သော်လည်းလိင်တံနှင့်မှန်ကန်စွာစကားပြောလိုသောစိတ်မရှိပါကသင်သွေးထဲရှိသွေးကိုမရယူနိုင်ပါကအသုံးမဝင်ပါ။
Viagra တောင်မှမင်းကိုခက်ခက်ခဲခဲမရတဲ့အချိန်မှာသင်တကယ်ကိုခံစားရတယ်! Levitra, Cialis လည်း ... ဒီ rebooting လုပ်ခြင်းသည်အဖြေဖြစ်သည်ကိုငါသိသည်။
ကျွန်ုပ်သည် ၂၆ နှစ်ရှိပြီးနေ့စဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း ၁၅ ရက်အကြာမှာငါစိုက်ထူဖို့မလွယ်ဘူး။ ငါအကူအညီတောင်းဆရာဝန်ထံသို့သွားလေ၏ သူကကျွန်တော့်ကို cialis 26 mg ပေးတယ်။ cialis နှင့်အတူငါခဲယဉ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ပျော်လိုက်တာ၊ ငါနောက်တစ်ခါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစကြည့်တော့တယ်။ မနေ့ကတူညီတဲ့ဖြစ်ရပ် (စိုက်ထူခြင်းမရှိ) ဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်မရဲ့လိင်တံထဲမှာအာရုံခံစားမှုမရှိခဲ့ဘူး။ ငါ Cialis ကိုပြန်ခေါ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်မရဲ့စိတ်ဆင်းရဲစရာကလုံးဝအလုပ်မလုပ်ဘူး။ ဒီတစ်ခါတော့ငါ porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ပြီ။
Viagra ကိုမေ့လိုက်ပါ။ ငါကြိုးစားပြီး cialis ကိုလအတန်ကြာကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါကလုံးဝမကူညီခဲ့ဘူး။ အဲဒီမှာသွေးအများကြီးစီးဆင်းနေတာကိုသတိပြုမိပေမဲ့အဲဒါကကျွန်တော့်စိတ်ကိုလုံးဝမကူညီဘူး။ တကယ်တော့ငါစဉ်းစားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပိုမိုပျက်စီးစေသည်ဟုထင်, "Viagra ပင်လျှင်အလုပ်မလုပ်လျှင် fk ငါ့အဘို့မျှော်လင့်ချက်တကယ်မရှိ!" ဒါဟာငါ့ကိုပိုပြီးစိတ်ဓာတ်ကျစေခဲ့သည်။ ငါတို့ဒီမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemနာကိုမကိုင်တွယ်ဘူး၊ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်သင့် ဦး နှောက်ကပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကိုအရှိန်မြှင့်လိုက်တဲ့အကြီးမားဆုံးနိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုကတော့ ED ဆေးတွေအလုပ်လုပ်တာရပ်သွားတာပါပဲ။ ၂၃ နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်နဲ့အိပ်နေခဲ့တယ်။ ငါဆေးစသောက်ဖို့လိုတာမလုံလောက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် WTF ကအလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ငါအလုပ်မဖြစ်ဘူး။ မသိသောသူတို့အဘို့, Cialis သင်နှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်လာမှသာအလုပ်လုပ်တယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးမိတာက၊ ဘုရားသခင့်နာမည်က ၂၃ နှစ်၊ ၄ ပေ ၁၁၊ ဆံပင်ရွှေရောင်ဆံပင်၊
ဒါနဲ့ဇန်နဝါရီလဖြစ်ပျက်မှုနဲ့အီစတာတဝိုက်ဖြစ်ပျက်မှုကြားမှာကျွန်တော်ပြီးသွားပါပြီ။ ကျွန်တော့် testosterone ဟော်မုန်းကိုစစ်ဆေးပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါနဲ့ငါ့ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ BAM ကို googled !! မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်နှင့်ချိန်းဆိုချက်တစ်ခုပြုလုပ်ပြီးသူမအနေဖြင့်အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းခံခဲ့ရကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဟားဟား။ ဝမ်းနည်းစရာကတော့သူမသည်ဤစွဲလမ်းမှုကိုသတိမပြုမိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သူ့ကိုအမှန်တကယ်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။
ငါ့အတှေ့အကွုံမြားတှငျ Viagra နှငျ့ cialis တို့သညျအကြှနျုပျအတှကျအဘယျမြှမြှမထငျခဲ့ပါ။ ငါ့ရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုကြောင့်ငါဟာစစ်မှန်တဲ့မိန်းမနဲ့မဆက်ဆံခဲ့ဘူး။
အသက် ၂၅ နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ ED နှင့် DE ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်
လွန်ခဲ့သော ၁၃ နှစ်ကကျွန်ုပ်ကောလိပ်တက်ချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခဲ့သည်။ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်မှာစစ်မှန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့နိုးထဖို့အခက်တွေ့ခဲ့တယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှယေဘူယျ Viagra သည်ငါ့ကိုအသက် ၂၉ နှစ်တိုင်အောင်ပြfewနာအနည်းငယ်နှင့်စစ်မှန်သောဆက်ဆံမှုပြုရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင်ဆေးပြားများနှင့်ပင်စစ်မှန်သောလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် ပို၍ ခက်ခဲလာသည်။ ငါ့ရဲ့ပြproblemနာကိုသဘောပေါက်လိုက်တဲ့အခါငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစွန့်လွှတ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါမရှိဘဲကြာရှည်ငါအရှည်ဆုံး 13 ပတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်လိင်အကြောင်းစဉ်းစားရန်နှိုးဆော်ခြင်းမပြုနိုင်သောကြောင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ကျွန်မရဲ့တစ်ခုတည်းသောလွတ်မြောက်မှုကကျွန်မကိုနှိုးဆွပေးမယ့်တစ်ခုတည်းသောအရာထဲကိုပြန်ဝင်သွားဖို့ပါ။ ထိုအခါကနောက်ကျော porn မှဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီဟာကိုကုသပေးဖို့လိုပါတယ်
Viagra သင်တို့ကိုခက်ခဲစေသည်။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ငါတော့ဒါကိုလုံးဝမပျော်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါကိုအားလုံးထုံလိုက်ပြီး cum လုပ်ဖို့ခက်တယ်။ သငျသညျသဘာဝကမပွုနိုငျလျှင်ထို့အပြင် BS ပါပဲ။ The Great Gatsby တွင်ရေးထားသည့်အတိုင်း“ ကျွန်ုပ်သည်ငါးနှစ်သားအရွယ်ရှိပြီးလိမ် ပြော၍ ဂုဏ်ပြုခြင်းခံရသည်။ ”
ကျွန်ုပ်၏ ED သည် Cialis ကဲ့သို့သော erection pill များပင်b/ c နှင့်ဆက်စပ်သော porn နှင့်ဆက်စပ်သည်။ ယေဘူယျ Cialis သည်အနည်းငယ်သာလုပ်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်စိုက်ထူမှုကိုထိုးဖောက်နိုင်ရန်သို့မဟုတ်အလွယ်တကူရရှိရန်ကူညီသည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှမခံစားနိုင်တာ .. ဘယ်တော့မှဘာမှမခံစားရဘူး။ ခ / c ။ ငါအရှိဆုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရလျှင်, ငါ့အလိုရှိသမျှ sensitivity ကို။ ဒီ reboot လုပ်ခြင်းဟာ PMO မရှိတဲ့လအနည်းငယ်ထက်ပိုပြီးမကြာနိုင်ပါဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊
ငါအသက် ၂၀ ကျော်စကတည်းကလိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာမကောင်းဘူး၊ ငါမှာပြင်းထန်တဲ့ ED ရှိခဲ့တယ်။ Viagra ကိုငါမတွေ့ခင်အထိငါနဲ့အတူနေခဲ့တယ်၊ အဲဒါကငါ့ကိုဒီနှစ်အစောပိုင်းအထိလိင်ဆက်ဆံဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ ထိုအခါပင်ကြောင်းအလုပ်လုပ်တော့ဘူး။ ကျွန်မရဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှုအတော်လေးမြင့်တက်လာတာသတိပြုမိခဲ့တယ်။ နံနက်ခင်းတွင်သစ်သားသို့မဟုတ်အလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သို့သော် porn နှင့် maunual stimulation ဖြင့်ကျွန်တော်ခဲယဉ်းနေဆဲဖြစ်သည်။
Viagra သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည် - ကျွန်ုပ်သည် ၆ နှစ်မှ ၇ နှစ်အထိအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုကင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုမှဖြစ်နိုင်သည်။ ငါ 6% copulatory ED ရှိခဲ့ပါတယ် မပါဘဲ ဒါပေမဲ့ porn ကိုစိုက်ထူတာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး (ငါလည်း porn မပါဘဲနှိုးလို့မရဘူး - ဒါကြောင့် ED တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာနဲ့ ED) ။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကပင်အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုဝက်သည်ခြောက်လမှ ၇ နှစ်အတွင်းတစ်ဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာသဖြင့်ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းစေသော ED ၏သဘာဝတိုးတက်မှုမျှသာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
(အသက် ၁၉ နှစ်) ဒါကြောင့် [မကောင်းတဲ့] အတွေ့အကြုံကြောင့်ငါအားနည်းချက်ကိုသက်သာစေနိုင်တဲ့ Viagra အတွေးကိုငါစပြီးစတင်အသုံးပြုခဲ့တယ်။ ငါခိုင်မြဲသောစိုက်ထူခြင်းနှင့်အကြောင်းကိုခြောက်ကြိမ်သို့မဟုတ် 19 ကြိမ်များအတွက်အဟောင်းအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်, သူမအနည်းဆုံး6ကြိမ်မုသားမုသာစကားကို orgasms session တစ်ခု !! ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရွေးနုတ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်လူသားဖြစ်သည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ သို့သော်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကွန်ဒုံးကို ၀ တ်ထားပြီးနောက်ကျောက်တုံးများကိုစွန့်ခွာ။ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော်လည်းဤအချိန်တွင်ငါစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိသောကြောင့်ဘာများပေးသနည်း။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ __ သို့သွား။ အတူတူ Viagra ဆေးလုံးကိုယူသောအခါငါဟိုတယ်မှာအချိန်ကြာမြင့်စွာအမျိုးသမီးမိတ်ဆွေနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံဖို့ထင်သောကြောင့်, ပြိုကျလာသည်ဟုကမ္ဘာ၏ထိပ်ပေါ်မှာဖြစ်ခြင်း၏လပေါင်းများစွာပြီးနောက် သို့သော်ကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်မိသည်မှာဤအချိန်၌ကျွန်ုပ်သည် Viagra နှင့်တောင်မရရှိနိုင်ပါ။ သူမနှင့်အတူအိပ်ရာပေါ်တွင်လဲလျောင်း။ သက်တောင့်သက်သာခံစားခဲ့ရသည်နှင့်တူသည်။
ငါအရမ်းကြည့်နေတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာကိုကြည့်နေတယ်၊ ငါအလွယ်တကူလိင်ဆက်ဆံလို့မရဘူး၊ ယခုငါ Cialis သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါး၏ယေဘုယျပုံစံကိုအသုံးပြုရတော့မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်လုံးဝမကောင်းပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့အထိခိုက်မခံတဲ့အရာအားလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီး၊ ငါလိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့ရင်တောင်ဘာမှမခံစားမိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ငါထနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါကြာရှည်ခံနိုင်, ရှားပါးသည်။
ငါပြchemနာကိုဓာတုဗေဒပြင်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် ကဖိန်းနဲ့အရက်ကငါ့အတွက်လိင်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ အဲဒါမလုံလောက်ဘူးဆိုရင်ငါ Erectile disfunction မူးယစ်ဆေးဝါးတွေသုံးတယ်။ ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့ကောင်မလေးကိုမပြောခဲ့ပါဘူး အဆိုပါ erectile disfunction မူးယစ်ဆေးဝါးများငါ့ကိုဆိုးရွားသက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုခေါင်းကိုက်စေတယ်၊ သို့သော်လည်းငါသည်ဤလုပ်ငန်းကိုအောင်ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ အဆိုပါ ED မူးယစ်ဆေးဝါးများအလုပ်မလုပ်ဘူး
ငါ PMO ဘို့ခဲယဉ်းရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမယ့်အစစ်အမှန်အရာရောက်လာသောအခါ, တကတိုးတက်မှုအနည်းငယ်ရဖို့အမြဲအကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါနဲ့ Cialis ကိုယူပြီးစတင်ခဲ့သည်။ အချိန်ကျော်, ကို C များအတွက်သောက်သုံးသောတူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်တိုးမြှင့်ဖို့စတင်ခဲ့နှင့်ပင်ထို့နောက်သူကသာတစိတ်တပိုင်းအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာသည့်အခါကြိမ်ရှိခဲ့သည်။ WTH? အဆုံးဆီသို့, C ကိုဘဲ, အောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းသုညအနီးရှိခဲ့သေးသေး PMO ရန်ခက်ခဲရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမတွေ့မချင်းကျွန်ုပ်သည်စွဲလမ်းသူဖြစ်ကြောင်းမသိခဲ့ပါ။ ကျွန်မရဲ့အတွေးတွေကတခြားယောက်ျားတွေလိုပဲ။ ဘယ်တော့မှမလုံလောက်ဘူး။ ငါလိင်ဆက်ဆံခြင်းကို (၃) ကြိမ်ဆက်တိုက်မလုပ်နိုင်ခဲ့သည့်အခါ (ယခင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ထပ်တူပြသနာရှိပြီးနောက်) ကျွန်ုပ်သည်ဆရာ ၀ န်သို့သွားပြီး Viagra နှင့်အခြားဆေးပြားအချို့ကိုရရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့ငါစဉ်းစားမိပြီ၊ ငါတ ဦး တည်းဆေးလုံးကိုယူ။ , က "သွား" စတင်ခဲ့သည်။ ဟုတ်တယ် !! နောက်ဆုံး !! ဒါပေမယ့်ငါကအဲဒါကို“ မပျော်” ဘူး၊ ငါအထွတ်အထိပ်သို့ porn စဉ်းစားစတင်ခဲ့တယ်။
ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူယောက်ျားတွေနှင့်အတူညာဘက်ရှိဖြစ်၏။ အခုတော့ဒီဆေးတွေကိုသောက်ရတာဟာမယုံနိုင်စရာရယ်စရာကောင်းနေပြီ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေမိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတစ်ယောက်တည်းကငါ့အသက်မှာသူတို့ဆရာဝန်ကိုမေးကြည့်ပါ ဦး ။
ဟုတ်တယ်၊ သူတို့ကစျေးကြီးတယ်၊ ပြီးတော့သူတို့က ROCK solid erections ကိုထိန်းသိမ်းရာမှာအများကြီးမကူညီဘူး၊ အများအားဖြင့်ငါကအော်ဂဇင်ပြုဖို့အတွက်ငါဟာယုတ်ညံ့တဲ့အရာတွေကိုစဉ်းစားနေတုန်းမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆုပ်ကိုင်ထားရတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှသေခြင်းတရားသည်ကျွန်ုပ်ကိုထိုနေရာ၌အမှန်တကယ်မီးရှို့ခဲ့သည်။
ငါ SO ဤအရာအားလုံးပြီးဆုံးပါပြီဖြစ်၏။ ငါသည်ဤအဆိပ်အတောက်အားလုံး၏ကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကင်းစင်ဖို့မစောင့်နိုင်ပါ။ ဆေးပြား, မပို porn, မပိုမုသာစကားကိုအဘယ်သူမျှမကပို။
ED ဟာပိုဆိုးလာတယ်။ Levitra, Viagra, Cialis စသည့်ဆေးများမပါဘဲကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ (ကျွန်ုပ်သည်ယခင်ကဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်) လိင်မှုကိစ္စတွင်၊ ကျွန်ုပ်သည်မျက်လုံးများပိတ်ပြီး၊ P ဗီဒီယိုများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ကူးယဉ်သည်။ ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးစဉ်းစားချက်မှာ“ ငါဘာမှမခံစားရဘူး” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ထိုအခါငါငါ့စိုက်ထူဆုံးရှုံး။
ငါ PMO သို့တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာလိမ်။ လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာကျွန်မမှာဆက်ဆံရေးအနည်းငယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာပြissuesနာတွေရှိမယ်ဆိုတာကိုသိလို့ကျွန်တော်စွဲမက်ခဲ့မိတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုရှောင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ငါအရမ်းစွဲမက်စရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေချိန်းတွေ့တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးရင်းနှီးမှုတွေကိုရှောင်ရှားလေ့ရှိပြီးဒီမိန်းကလေးတွေကိုသူတို့ထိုက်သင့်တဲ့လေးစားမှုနဲ့ဂရုစိုက်မှုနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ်လောက်မှာသိသိသာသာသိသာထင်ရှားတဲ့ကျန်းမာရေးပြafterနာတစ်ခုပြီးတဲ့အခါကျွန်မမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးအဲဒီအလေးချိန်ကိုလျှော့ချဖို့၊ အားကစားခန်းမထဲကိုဝင်ဖို့၊
ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ PMO သည်ကျွန်ုပ်လက်၌အချိန်နည်းသောကြောင့်အနည်းငယ်ကျဆင်းခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာစားပွဲတွင်အနည်းဆုံးတစ်ရက်သို့မဟုတ်ရက်အနည်းငယ်တစ်ကြိမ်ရှိနေစဉ်။ ငါ ED တိုးတက်မှုအချို့ကိုတောင်မှခေတ္တမျှတွေ့ခဲ့ရသော်လည်းကိုယ်ခန္ခာကိုယ်လိမ္မာပါးနပ်လိုသည့်နေရာသို့ပြန်ရောက်လာသည့်တိုင်ကျွန်ုပ်၌ပြissuesနာများရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူအော်ဂဲနစ်ဆိုင်ရာပြissueနာပိုများနေသည်ဟုထင်လာခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလေးအနက်ပြောပြီးမာနကိုမျိုချလိုက်ပြီးနောက်ဆရာဝန်နဲ့စကားပြောခဲ့တယ်။
ငါ Viagra ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါကနည်းနည်းပဲကူညီခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ porn / masturbation ထွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ အဲဒါကို placebo လို့ခေါ်ပါ။ မင်းအလိုရှိတဲ့အရာကိုခေါ်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါချက်ချင်းသက်သာသွားတယ်။ ငါရက်သတ္တပတ်ကုန်သွားပြီးတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်လာတယ်။ ကျွန်မရဲ့ယုံကြည်မှုဟောင်းပြန်ပေါ်လာတယ်။ ငါအလုပ်မှာ ဦး ချိုတွေနဲ့နွားကိုယူလာတယ်။ စိတ်အားတက်ကြွခဲ့တယ်၊ အိမ်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ်၊ စည်းရုံးတယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းတွေတိုးလာတယ်၊ အခုငါ mojo ကိုပြန်ရတော့မယ်လို့ခံစားရတယ်
ငါကအရပ်ရှည်တယ်၊ တော်တော်လေးကြည့်ကောင်းတယ်၊ အားကစားတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ် ၁၂ နှစ်အရွယ် မှစ၍ အကြိုက်ဆုံး passtime သည် fap ဖြစ်နေသည်။ ငါ၌ပြီးခဲ့သည့်ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း ED ပြissuesနာများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၎င်းသည် porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်ဟုအမြဲထင်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၄ နှစ်တာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည် Viagra / cialis (တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်အလုပ်မဖြစ်ဘူး) ကိုယူပြီးကျွန်ုပ်သည် ED ဆေးပြားကိုသောက်သုံးနေသောငယ်ရွယ်သော (အသက် ၃၂ ​​နှစ်) အရွယ်ရှိသည်ဟုထင်မိသည်။
ငါအတိတ်ကာလကသွပ်, ginkgo နှင့် l-arginine ယူခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နို ၀ င်ဘာလအစောပိုင်းကဤပြproblemနာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ထွက်ပေါ်လာသည်နှင့်စတင်ခဲ့သည်။ အခုမေလကုန်ပြီ ကျွန်တော်သူတို့ကိုလအနည်းငယ်ကြာအောင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လခန့်ကဖေဖော်ဝါရီလမှာရပ်လိုက်တယ်။ သူတို့အကူအညီပေးတာမထင်ဘူး ပြီးတော့လိင်မတိုင်မီ l-arginine ပမာဏအလွန်များများစားစားသောက်သူများသည်ကျွန်ုပ်အကြောင်းကိုဖတ်ပြီးပါပြီ။ သီအိုရီအရထုတ်ကုန်သည်အန္တရာယ်မရှိဟုယူဆရသည်။ ဒီဆေးတွေကိုငါတစ်ခါမှမသောက်ဖူးဘူး၊ ပုလင်းထဲမှာရေးထားသမျှအတိုင်းပဲလုပ်ခဲ့တယ်။
လက်ရှိငါငါးဆီယူသည်၊ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနှင့်သင့်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်သည်ကိုငါကြားသည်။ သို့သော်လည်းငါသည် Viagra သို့မဟုတ် cialis ယူဘယ်တော့မှနှင့်ဤယူချင်တယ်။ ဒါတွေကိုကျွန်တော်အကြံပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး သူတို့သည်ပြtheနာကိုခေတ္တဖုံးကွယ်ထားပြီးမဖြေရှင်းပါ။ ငါထင်တာကတော့ sex enhancers အဖြစ်ကြော်ငြာထားတဲ့ဖြည့်စွက်ချက်တွေအားလုံးဟာ BS ပါ။ သူတို့ဟာခန္ဓာကိုယ်အပေါ်တစ်နည်းနည်းနဲ့အကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ ကျန်းမာစွာစားပါ၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပုံသဏ္inာန်ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားပြီးစိတ်မပူပါနဲ့ ဖြည့်စွက်အကြောင်း။ ကြွင်းသောအရာသည်သဘာဝအတိုင်းလိုက်နာသင့်သည်။ မိမိအပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူမိမိအကောင့်ကိုဖတ်ပါ
ဤအသက် ၃၀ အရွယ်စစ်တပ်ဟောင်းသည်စောင့်ဆိုင်း။ မရ။ ဒါကြောင့်သူကလိင်တူချစ်သူတစ်ယောက်နဲ့လိင်ကိစ္စစတင်ခဲ့ပြီး၊ ဤတွင်သူ၏အစီရင်ခံစာပါ
1. မ Ping သို့မဟုတ်မင်ငါ့ကို-နှင့်စေခဲ့ပါတယ်ဒီသံသယ-မှ Ive ခဲ့သကဲ့သို့ရသေ့အဖြစ်တာအဖြစ်မဖြစ်မပါဘဲဖြစ်ပါတယ်။ တီဗွီကြည့်ရတာညင်ညင်သာသာလုပ်နေတာနဲ့တခြားလူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကျွန်တော်တကယ်ကိုတောင့်တခဲ့တယ်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်၏“ ပုံမှန်” အပြုအမူနှင့်ကွာခြားသည်၊
၂။ Ive ကလူသစ်တစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးသူမပျော်ရွှင်အောင်ကြိုးစားနေလို့ကျွန်မပြန်လည်နာလန်ထူလာတယ်။ levitra ၏အကူအညီနှင့်အတူ, ငါတို့လိင်စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟာကမသင့်တော်ဘူးနော်ငါနားလည်တယ်၊ ငါစူပါမင်းဖြစ်လိုသောအခါငါ 2mg levitra သုံးပြီးငါအန်စာတုံးလှိမ့်ဖို့ဆန္ဒရှိသည့်အခါ 10mg ။ အစာမကြေဘဲတစ်နာရီကြာအစာစားခြင်းကထိရောက်မှုကိုတိုးစေသည်။
3. ပြန်လည်ထူထောင်ရေး, တကယ်တော့ဖြစ်ပျက်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာပြန်လည်ရှင်သန်လာသည်နှင့်အမျှလိင်သည်နှစ်ကြိမ်မျှခံစားမှုရှိပြီးဖြစ်သည်။ ကျဆင်းမှုသည်တဖြည်းဖြည်းချင်းဘယ်လောက်များများရယ်စရာကောင်းသနည်း၊ သင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် WTF တစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးသွားသည်ကိုသင်သတိမပြုမိသောကြောင့်လား။ ခံစားတော့မည်မဟုတ်၊ ပြန်လာပြီ
4 ။ တနည်းကား, Id ဤစီမံကိန်းများ၏ဖန်တီးသူနှင့်အကူအညီနဲ့ရှာကြံအားလုံးအခြားလူတို့အားကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြလို။ ယောက်ျားတွေ truckin အပေါ်ထားပါ။
(၂၆) နှစ်မှာငါဟာနှစ်ရှည်လများကြာရှည်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။ မိန်းကလေးနှင့်အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံသည့်အချိန်ကာလရောက်သောအခါကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမခက်ခဲပါ။ ငါစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အရာအားလုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ထိမိတဲ့အခါတကယ်ခက်ခဲ့ပေမဲ့ထိုးဖောက် ၀ င်လာသောအခါတစ်နည်းနည်းဖြင့်ပျော့ပျောင်းသွားတယ်။ မိန်းမကပြောတယ်ဒါကအဆင်ပြေတယ်၊ ​​စိတ်မပူနဲ့ငါတကယ်စိတ်ဓာတ်ကျတယ်။ ငါရှက်ခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့သည်။ ငါက ၂ နှစ်ကြာလိင်မဆက်ဆံဘူး၊ ငါ ED အမျိုးအစားကိုမွေးဖွားလာပြီလို့ထင်ခဲ့တယ်
ဒီပြproblemနာကကျွန်တော့်ကိုတကယ်အနှောင့်အယှက်ပေးနေတာ။ ပြီးတော့အဲဒါကိုပြုပြင်ဖို့ကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက်ချမှတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါဆရာဝန်ဆီသွားတယ်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအားလုံးကအနှုတ်လက္ခဏာထွက်လာတယ်။ ကျွန်တော့်ဆီးကြိတ်ကပုံမှန်ပဲ။ ကျွန်တော့်နှလုံးသားအားလုံးကောင်းခဲ့တယ်။ ကောင်းပြီတိုတိုပြောရရင်အားလုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရကောင်းပြီ။ ဒီတော့နောက်ဆုံးတော့ပြtheနာကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြthatနာဖြစ်နေတယ်။ အခုငါပြclearlyနာရဲ့အဓိကအချက်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ထုတ်နိုင်ပြီ။
၁။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခြင်းကသင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမျှော်လင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် porn ကိုအလွန်အကျွံကြည့်ရှုနေပါကသင်သည်လိင်ခြားသူတစ် ဦး ၏ရုပ်ပုံများမှစိတ်လှုပ်ရှားရန်သင့် ဦး နှောက်ကိုလေ့ကျင့်ပေးသည်။ ပြီးတော့သင်အသက်ရှင်သောလူတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံလျှင်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဦး နှောက်သည်ဤလိင်ဆက်ဆံမှုအသစ်ကိုအသုံးမပြုပါ။ သင့် ဦး နှောက်ထဲတွင်အလွန်အားနည်းသောလုပ်ဆောင်မှုပုံစံများရှိပြီးသင့်ကိုအာရုံစူးစိုက်စေပြီးသင်လုပ်နေသည့်အရာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ အလိုအလျောက်လှုံ့ဆော်မှုကိုဆုံးရှုံးစေသည်။ သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အပျော်အပါးကြားဆက်သွယ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သက်ရှိလူနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အပျော်အပါးကြားဆက်နွယ်မှုမှာအားနည်းနေသည်။
2) ကိုကြည့်ရှုသူများသောအားဖြင့် passive ဖွစျပါတယျ porn စောင့်ကြည့်နေစဉ်။ ထိုင်နေစဉ်အများအားဖြင့် (တစ်ခါတစ်ရံလဲလျောင်းသို့မဟုတ်ဘာပဲ) porn စောင့်နေကြလော့။ နည်းနည်းခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေစဉ်အတွင်းရှိပါသည်။ တနည်းကား, သင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဦးနှောက်ကဒီအပြုအမူမှတ်တမ်းတင်။ ဒါကြောင့်အချိန်အတန်ကြာပြီးနောက်သင့်ခန္ဓာကိုယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ရပ်မျှမျှတတအနိမ့်ကြွက်သားစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းသိလာကြတယ်။ Little ကသွေးစီးဆင်းမှုလိုအပ်ပါသည်။ သို့သော်လိင်မကြာခဏအတော်လေးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလှုပ်ရှားမှုနှင့်ရလဒ်ပိုမိုမြင့်မားသွေးဖိအားအဖြစ်တွေအများကြီးလိုအပ်တယ်။ သင်သည်များစွာသောလူတို့အဘို့တစ်လူသတ်သမားသောကွန်ဒုံးပေါ်တွင်တင်ရန်ရှိသည်။ တနည်းကား, ဤသူသည်သင်တို့အလွန်အကျွံအာရုံစိုက်သင့်သစ်သားဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်စေသည်။
၃။ Porn သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုကိုတိုးစေသည်။ အခြားယောက်ျားတွေရဲ့အရည်အချင်းကိုမမှီနိုင်မှာကိုသင်စတင်ကြောက်လန့်နေတယ်။ အခုဒီအကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားခြင်းကငါ့ကိုပြုံးစေသည်။ ဒီပြproblemနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ သင်နှင့် porn နှင့်အပျော်အပါးကြားရှိအာရုံကြောဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုကိုချိုးဖျက်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်အသက်ရှင်သောလူနှင့်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်လိင်အကြားအသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ပုံမှန်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
သင်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျန်းမာနေသည်ဆိုပါက၊ ခဏအကြာတွင်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်အာရုံကြောကွန်ယက်အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။ ကျွန်တော့်ကိစ္စမှာမိန်းကလေးအသစ်တွေနဲ့ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံဖို့သာသွားခဲ့တာ (မင်းကိုထပ်တူထပ်မျှလုပ်ဖို့မတောင်းဆိုဘူး၊ ဒါပေမယ့်အွန်လိုင်းပေါ်မှာလူမှုရေးကွန်ရက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူပါတီတွေနဲ့တွေ့နိုင်တယ်။ လှပတဲ့ချိုသာတဲ့မင်းသမီးများစွာ) အဲဒီမှာနှင့်မကြာခဏကမျှကြိုးမျှင်) ။
ပထမတော့ငါ kamagra ဂျယ်လ်ကိုသုံးတယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့်တော့စျေးသက်သာပြီးအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ Viagra ။ လအတော်ကြာပြီးတဲ့နောက်ငါမလိုအပ်တော့ဘူး။ ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကအာရုံကြောပုံစံအသစ်တွေကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ မိန်းကလေးကသူမရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုချွတ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲစိတ်လှုပ်ရှားလာတယ်။ အခုတော့ကွန်ဒုံးကိုဝတ်လိုက်တာနဲ့တကယ့်ကိုခဲယဉ်းနေပြီ၊ အကြောင်းကတော့ငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ကထိုးဖောက် ၀ င်မှုကိုအပျော်သဘောနဲ့ဆက်စပ်နေလို့ပါ။
ငါစိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုခုကိုပျောက်ကွယ်သွားပြီလေ။ ငါအဝတ်အချည်းစည်းကြိုက်နှစ်သက်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်။ အခြားအရာအားလုံးငရဲသို့သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီဟာကဖြစ်သင့်တဲ့နည်းလမ်းပဲ။ သင်၌အဓိကကျန်းမာရေးပြhaveနာများသို့မဟုတ်သင်အသက် ၅၀ ကျော်သူများမဟုတ်လျှင်သင့်တွင် ED ပြproblemsနာရှိသည်ဟုယုံကြည်ရန်အကြောင်းပြချက်လုံးဝမရှိပါ။ ၎င်းသည် ၀ ိုင်ယာကြိုးကိစ္စဖြစ်သည်။
မအောင်မြင်မှုများကိုနှလုံးထဲသို့မထည့်ပါနှင့်။ ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျက်စီးစေတဲ့လမ်းပါ။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်အသုံးမပြုပါ။ အကြောင်းမှာသင်သည်နှစ်များတစ်လျှောက်သင်သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်လူရှုပ်ရန်တွန်းအားပေးရန်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ မိန်းကလေးအများစုသည်နားလည်သဘောပေါက်ကြသည် (အကယ်၍ သူမပါလျှင်သူမအားနှုတ်ဆက်ရန်အကြောင်းပြချက်များပိုမိုများပြားသည်) ။ ဤပုံစံကိုပြောင်းလဲရန်လုပ်ဆောင်ရုံသာမကအားလုံးသည်တဖြည်းဖြည်းသဘာဝကျလာမည်။
(အသက် ၅၀) လွန်ခဲ့သော ၇ နှစ်ခန့်က ED သည်အချိန်ရလာသည်။ ဒါဟာပိတ်ထား switch နဲ့တူ၏။ ငါ့မျက်နှာသာ P အတွက်တောင်မှအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး! ထိုအချိန်တွင် GF နှင့်စာရွက်စာတမ်းသို့သွားခဲ့သည်၊ သူသည် PMO နှင့် ပတ်သတ်၍ ဘာမှမသိ၊ စမ်းသပ်မှုအားလုံးအဆင်ပြေသည်။ T နည်းနည်းနိမ့်ပေမယ့်အဲဒီမှာအဲဒီမှာအသက်တာ၏လုံးဝမရှိခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ Got Cialis ညွှန်ကြားထားပြီးနောက် ၇ နှစ်ကြာ GFs နှင့် PMOing တို့နှင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောတစ်လခန့်က Cialis သည် GF နှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ ထိုအခါငါ "Porn ED" ပေါ်တွင်အင်တာနက်ရှာဖွေရေးလုပ်ခဲ့တယ်အခါ။ ငါဖတ်နေတာကိုသန့်ရှင်းသောဘုရားလုပ်ပေးတာကိုကျွန်တော်အံ့သြမိတယ်။ ငါဆုံးရှုံးနိုင်သည့်အရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး PMO ကိုပထမအပတ်နှင့်ဒုတိယပတ်တွင်စိုက်ထူခြင်းမရှိဘဲရေချိုးခန်းထဲတွင် M တစ်ခုတည်းနှင့်ချက်ချင်းရပ်လိုက်သည်။ သို့သော်လုံးဝစိုက်ထူခြင်းမရှိသေးပါ။ ထို့နောက်ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းထိုနေရာတွင်သေဆုံးသွားသည်။ ငါထင်ပုံသေ ငါ GFs အကြားဖြစ်ဖြစ်ပျက်ဒါကြောင့်ပြီးပြည့်စုံသောအချိန်ကိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်တဲ့ရက် ၃၀ ဒါမှမဟုတ် ၃ ရက်လောက်အဲဒီမှာငါနေခဲ့ရတယ်။ ပြီးတော့ဖြစ်ပျက်ခဲ့, ငါအစဉ်အမြဲငါပထမ ဦး ဆုံးစိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုမြင်မက်! ယခုတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်သာထင်းကိုနံနက်စောစောထည် ဒီ freakin အလုပ်လုပ်တယ်! ငါလာမယ့် GF ရသည်အထိငါမစောင့်နိုင်! ဒါကြောင့်အတိုချုပ်ပြောရရင် PMO လုံးဝနီးပါးမရှိတော့တဲ့တလလောက်မှာအကြီးအကျယ်တိုးတက်နေတာကိုး။
အနိမျ့ Dopamine သင်ျခြိုခုနှစ်တွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ? (2011)
NoFap ဆေးဝါးသည် ED & SSRI နှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းကိုဖြေသည်
Viagra ကိုသင်နားမကြား Make ရနိုင်ပါသလား, ဆရာဝန်များပြောပါ
အဘယ်ကြောင့်ငါ Cialis ရပ်တန့်နေပါတယ်
ပျော်စရာအဘို့အ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမူးယစ်ဆေးဝါးများယူသူကိုလူပျိုတို့ကသူတို့ရဲ့လိင်ဘဝတွေကိုပျက်စီးစေခြင်းငှါ, တစ်ဦးလေ့လာမှုအသစ်အကြံပြုထားသည်။